47.8681°N 4.2219°W ﻿ / 47.8681; -4.2219 I Pont-lAbbé dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29220. I Daniel Couic no benny ...
48.5094°N 4.7642°W ﻿ / 48.5094; -4.7642 I Porspoder dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29221. I Yannick Marzin no benny tanàna ma ...
48.2164°N 4.0694°W ﻿ / 48.2164; -4.0694 I Port-Launay dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29222. I Michel Caro no benny tanàn ...
48.0442°N 4.3258°W ﻿ / 48.0442; -4.3258 I Pouldergat dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29224. I Gaby Le Guellec no benny tanàn ...
47.9558°N 4.3592°W ﻿ / 47.9558; -4.3592 I Pouldreuzic dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29225. I Marie-Thérèse Gourlaouen no b ...
48.0817°N 4.4119°W ﻿ / 48.0817; -4.4119 I Poullan-sur-Mer dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29226. I Martine Le Goff no benny ...
48.3408°N 3.6414°W ﻿ / 48.3408; -3.6414 I Poullaouen dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29227. I Didier Goubil no benny tanà ...
48.0264°N 4.6100°W ﻿ / 48.0264; -4.6100 I Primelin dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29228. I Alain Donnart no benny tanàna ma ...
47.9606°N 3.5356°W ﻿ / 47.9606; -3.5356 I Querrien dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29230. I Jean-Paul Lafitte no be ...
47.9967°N 4.0964°W ﻿ / 47.9967; -4.0964 I Quimper dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29232. I Bernard Poignant no benny tanàna ...
47.8736°N 3.5486°W ﻿ / 47.8736; -3.5486 I Quimperlé dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29233. I Alain Pennec no benny tanàna ma ...
48.1147°N 4.1206°W ﻿ / 48.1147; -4.1206 I Quéménéven dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29229. I Aain Le Quellec no ...
47.8447°N 3.6933°W ﻿ / 47.8447; -3.6933 I Riec-sur-Belon dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29236. I Sébastien Miossec no benny ...
48.3172°N 4.5472°W ﻿ / 48.3172; -4.5472 I Roscanvel dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29238. I Patrick Le Guillou no benny ...
48.7272°N 3.9844°W ﻿ / 48.7272; -3.9844 I Roscoff dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29239. I Joseph Seité no benny ta ...
48.2642°N 4.1933°W ﻿ / 48.2642; -4.1933 I Rosnoen dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29240. I Gérard Viard no benny tanàna m ...
47.9614°N 3.8336°W ﻿ / 47.9614; -3.8336 I Rosporden dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29241. I Gilbert Monfort no benny tanàna ...
47.8606°N 3.4603°W ﻿ / 47.8606; -3.4603 I Rédené dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29234. I Jean Lomenech no benny tanàna mand ...
48.1911°N 4.0600°W ﻿ / 48.1911; -4.0600 I Saint-Coulitz dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29243. I Gilles Salaün no benny t ...
48.5494°N 4.1797°W ﻿ / 48.5494; -4.1797 I Saint-Derrien dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29244. I Genevière Riou no benny tan ...
48.4544°N 4.3344°W ﻿ / 48.4544; -4.3344 I Saint-Divy dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29245. I Jean-Jacques Cozian no benny tan ...
48.3622°N 4.1211°W ﻿ / 48.3622; -4.1211 I Saint-Eloy, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29246. I Gilles Tandéo no benn ...
48.6039°N 4.3667°W ﻿ / 48.6039; -4.3667 I Saint-Frégant dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29248. I Ghislaine Morry no benny tanà ...
48.1644°N 3.7808°W ﻿ / 48.1644; -3.7808 I Saint-Goazec dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29249. I Jean-Claude Gouiffès no b ...
48.2183°N 3.6331°W ﻿ / 48.2183; -3.6331 I Saint-Hernin dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29250. I Jean-Claude Le Guelaff no ...
48.6956°N 3.7714°W ﻿ / 48.6956; -3.7714 I Saint-Jean-du-Doigt dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29251. I Hervé Quéméner no ben ...
47.8669°N 4.2794°W ﻿ / 47.8669; -4.2794 I Saint-Jean-Trolimon dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29252. I Jacques Augé no benny ...
48.5769°N 3.8425°W ﻿ / 48.5769; -3.8425 I Saint-Martin-des-Champs, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29254. I René F ...
48.5617°N 4.2633°W ﻿ / 48.5617; -4.2633 I Saint-Méen dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29255. I Jean-Yves Salaün no benny tanàna ...
48.2031°N 4.2814°W ﻿ / 48.2031; -4.2814 I Saint-Nic dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29256. I Maurice Le Bechec no benny t ...
48.5653°N 4.5964°W ﻿ / 48.5653; -4.5964 I Saint-Pabu dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29257. I Loïc Guéganton no benny tanàna m ...
48.6861°N 3.985°W ﻿ / 48.6861; -3.985 I Saint-Pol-de-Léon dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29259. I Nicolas Floch no benny ta ...
48.4317°N 4.6206°W ﻿ / 48.4317; -4.6206 I Saint-Renan dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29260. I Bernard Foricher no benny tanàn ...
48.3497°N 3.9944°W ﻿ / 48.3497; -3.9944 I Saint-Rivoal dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29261. I Yves-Claude Guillou no be ...
48.4472°N 4.0044°W ﻿ / 48.4472; -4.0044 I Saint-Sauveur, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29262. I Jean Billon no b ...
48.5117°N 4.1536°W ﻿ / 48.5117; -4.1536 I Saint-Servais, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29264. I Laurent Mazurie ...
48.2417°N 4.0647°W ﻿ / 48.2417; -4.0647 I Saint-Ségal dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29263. I André Le Gall no benny tan ...
48.1658°N 3.8833°W ﻿ / 48.1658; -3.8833 I Saint-Thois dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29267. I Bernard Saliou no benny ta ...
48.4797°N 4.3344°W ﻿ / 48.4797; -4.3344 I Saint-Thonan dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29268. I Denis Salaün no benny tanàna m ...
47.9600°N 3.6225°W ﻿ / 47.9600; -3.6225 I Saint-Thurien, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29269. I Joel Derrien no ...
48.5219°N 3.9453°W ﻿ / 48.5219; -3.9453 I Saint-Thégonnec dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29266. I Yvon Abiven no b ...
48.4011°N 4.2250°W ﻿ / 48.4011; -4.2250 I Saint-Urbain, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29270. I Jean-Louis Vignon n ...
48.5953°N 4.1372°W ﻿ / 48.5953; -4.1372 I Saint-Vougay dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29271. I Marie-Claire Hénaff no benny ...
47.9681°N 3.9336°W ﻿ / 47.9681; -3.9336 I Saint-Yvi dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29272. I Jacques François no benny tanàn ...
47.9375°N 4.0189°W ﻿ / 47.9375; -4.0189 I Saint-Évarzec dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29247. I André Guillou no benny tanà ...
48.5589°N 3.8736°W ﻿ / 48.5589; -3.8736 I Sainte-Sève dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29265. I Gilbert Michel no benny tanàn ...
48.7044°N 4.0258°W ﻿ / 48.7044; -4.0258 I Santec dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29273. I Bernard Le Pors no benny tanàna ma ...
48.0281°N 3.7008°W ﻿ / 48.0281; -3.7008 I Scaer dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29274. I Paulette Pérez no benny tanàna mand ...
48.4336°N 3.6761°W ﻿ / 48.4336; -3.6761 I Scrignac dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29275. I Marcel Coant no benny tanàna ...
48.6653°N 4.0628°W ﻿ / 48.6653; -4.0628 I Sibiril dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29276. I Jacques Edern no benny tanàna man ...